Topy Maso Eran-tany: Fahasalamana | Mifohaza! Febroary 2015
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Ourdou Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Maresaka Momba ny Fahasalamana
Na dia mandroso be aza ny fitsaboana, dia mbola be dia be foana ny aretina mampijaly ny olona. Hita anefa hoe azo sorohina ny ankamaroan’izy ireny.
Milaza ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana fa hahatratra 24 tapitrisa ny olona voan’ny kansera isan-taona, amin’ny 2035. Mihoatra 70 isan-jato izany raha oharina amin’ny olona voa amin’izao fotoana izao, izay tombanana ho 14 tapitrisa mahery. Ny antsasak’ireo anefa no heverina fa vokatry ny ataon’ilay olona ihany. Ohatra hoe misotro toaka be loatra, mifoka sigara, tsy manao fanatanjahan-tena, matavy loatra, na tsy mitandrina amin’ny taratra mankarary.
Nampanao fanadihadiana ny fanjakana raha marina tokoa hoe tena mifindra amin’ny olona amin’ny alalan’ny fampidiran-dra na ny toy izany ny maladie de la vache folle, na aretin’ny ombivavy adala. Hoy i Andrew Miller, solombavambahoaka: ‘Tena mampanahy anay ny maheno tatitra hoe mbola be dia be no atahorana ho voan’io aretina tsy ahitana fanafany io. Voalaza mantsy fa anisan’ny mahatonga azy io koa ny fampidiran-dra sy ny famindrana taova.’
Atahorana hijanona tampoka ny fon’ny olona kivy sy miady saina loatra. Izany no hita tamin’ny fanadihadiana natao nandritra ny 11 taona, tamin’ny Norvezianina efa ho 63 000. Namoaka tatitra avy amin’io fanadihadiana io ny Fikambanana Eoropeanina Miady Amin’ny Aretim-po hoe rehefa miady saina ny olona, dia lasa mamokatra hormonina be dia be ny vatany. Mety hankarary ny fony anefa ireny hormonina ireny, sady mahatonga azy tsy ho vonona handray torohevitra hanatsarana ny fahasalamany.
Nilaza ny mpahay siansa fa mankarary ny fofon-tsigara tavela ao an-trano, na any anaty fiara, na any amin’ny hotely. Arakaraka ny maha ela azy ireny no mampitombo an’ilay poizina ao anatiny. Mandinika ny voka-dratsin’izany izao ny mpahay siansa.
IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY:
“Ny fo falifaly dia sady mahasoa no manasitrana, fa ny fahakiviana kosa mahamaina taolana.”—Ohabolana 17:22.
“Aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin’ny zava-drehetra mandoto ny nofo.”—2 Korintianina 7:1.
Tsy hain’ny olona maro fa misy vokany eo amin’ny fahasalamany ny fahazarany. Jereo ato ireo fomba dimy hanampy anao sy ny fianakavianao hisoroka aretina sy ho salama kokoa.
Afaka ny Hiaina Firy Taona Ianao?
Afaka ny hiaina firy taona isika? Mba hamaliana an’izany, dia mila fantarina aloha hoe nahoana isika no mihantitra sy maty.
Hizara Hizara Maresaka Momba ny Fahasalamana
Topy Maso Eran-tany: Maresaka Momba ny Fahasalamana